Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Kọmitii njem nlegharị anya nke Africa gwara Air France, anyị hụrụ gị n'anya!
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ kacha ọhụrụ na Cote d'Ivoire • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akuko Gambia • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • Akụkọ kacha ọhụrụ na Mozambique • Akụkọ gbasara Seychelles • Akụkọ na -agbasa na Tanzania
Air France enyela ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya nke Africa ihe karịrị akara ngosi.
Kọmitii njem nlegharị anya nke Afrịka nwere obi ụtọ ịmụ maka mgbasawanye nke ụgbọ elu mba France mere atụmatụ maka oge oyi a.
Air France na -ele anya nke ọma n'ịgbasa ozi ya na Afrịka mgbe onye na -ebu ụgbọ ala nke France webatara oge oyi 2021/2022.
AIr France ga -agbasawanye netwọkụ ụwa ya na Zanzibar, Seychelles Maputo na Banjul
Onye isi oche ndị nlekọta njem nlegharị anya nke Afrịka na -aja mmemme a mma
Air France, Ekebere dị ka AIRFRANCE, bụ onye na-ebu ọkọlọtọ nke France nke nọ na Tremblay-en-France. Ọ bụ onye enyemaka nke Air France –KLM Group na onye guzobere otu njikọ ụgbọ elu ụwa SkyTeam.
Site na njem COVID-19 na njem nlegharị anya na Africa ka bụ ihe ịma aka. Igosipụta ntụkwasị obi nke Air France na -egosi maka Afrịka ga -emepụta ntụkwasị obi na ụlọ ọrụ yana olile anya n'etiti ndị ọbịa.
Paris-Banjul na ụgbọ elu France
Air France ga -amalite ọrụ na Banjul, isi obodo Gambia na West Africa.
A ga-eji Paris- Banjul rụọ ọrụ na Airbus A330 nwere oche 224. Ọ gụnyere oghere 36 na klaasị azụmahịa, 21 Economy Economy na oche 167 Economy.
Gambia bụ obere mba ọdịda anyanwụ Afrịka, nke Senegal jikọtara ya na oke osimiri dị warara nke Atlantic. Amara ya maka gburugburu ya dị iche iche gburugburu Osimiri Gambia. Nnukwu anụ ọhịa dị na Kiang West National Park na Bao Bolong Wetland Reserve gụnyere enwe, agụ, hippos, hyenas na nnụnụ na -adịghị ahụkebe. Isi obodo, Banjul, na Serrekunda dị nso na -enye ohere ịnweta osimiri. Ekwesịrị ịmalite ọrụ na Ọktoba 31.
Paris- Maputo na Ụgbọ elu France
Na -amalitekwa n'October 31is ọrụ ọhụrụ nke Air France na Maputo, Mozambique.
A ga-eji ụzọ ọhụrụ a aga Maputo na nnukwu Boeing 777-300ER na-enye klaasị mbụ, azụmaahịa, akụnụba adịchaghị na akụnụba.
Paris- Abidjan na ụgbọ elu France
AF704 ga -arụ ọrụ n'etiti Paris Charles de Gaulle site na Banjul ruo Abidjan na Ivory Coast.
N'oge na -adịbeghị anya, Ivory Coast nabatara onye isi oche ndị njem nlegharị anya nke Africa Cuthbert Ncube ma na -aga n'ihu ịgbasa njem nlegharị anya na mba ọdịda anyanwụ Afrịka a.
Côte d'Ivoire bụ mba ọdịda anyanwụ Afrịka nwere ebe ntụrụndụ osimiri, oke ohia mmiri ozuzo, yana ihe nketa nke ndị France na-achị. Abidjan, nke dị n'ụsọ Oké Osimiri Atlantik, bụ nnukwu obodo mepere emepe na mba ahụ. Ihe ama ama nke ọgbara ọhụrụ gụnyere ziggurat dị ka, kọmpụta La Pyramide na Katidral St. Paul, ihe na -efegharị efegharị jikọtara na nnukwu obe. N'ebe ugwu nke mpaghara azụmahịa etiti, Banco National Park bụ nchekwa oke ohia nke nwere ụzọ mkpagharị.
Paris- Zanzibar na ụgbọ elu France
Ugbua n'October 18, Air France ga -ejikọ Paris na agwaetiti ezumike na Tanzania, Zanzibar.
A ga-arụ ọrụ a na nkwụsị na Nairobi, Kenya na Boeing 787-9
Njem nlegharị anya na Zanzibar gụnyere ụlọ ọrụ njem na mmetụta ya na agwaetiti Unguja na Pemba na Zanzibar bụ mpaghara kwụụrụ onwe ha na United Republic of Tanzania.
Paris - Seychelles na ụgbọ elu France
Njem nleta Seychelles ekwuputala obi dịkwa m ụtọ ịnabata ọrụ A330-2200 site na Paris gaa na paradaịs njem nlegharị anya nke Indian Ocean na French. Ọrụ bidoro na 2019 wee kwụsịtụ n'ihi COVID-19.
Ọrụ a ga -amalite n'October 23.
Ndị njem nlegharị anya nke Africa Onye isi oche Cuthbert Ncube gwara eTurboNews, obi dị ya ụtọ maka mgbasawanye nke netwọk Air France na Africa. Ncube chere na nke a bụ ezigbo ọganiihu njem nlegharị anya Africa na -eche.